हिजो कुन कुन मधेशी नेतासँग भयो सरकारी वार्ता ? | सहारा टाइम्स
Home » Politics » हिजो कुन कुन मधेशी नेतासँग भयो सरकारी वार्ता ?
हिजो कुन कुन मधेशी नेतासँग भयो सरकारी वार्ता ?
काठमाडौ भदौ २७ गते । सविधान निर्माणका प्रकृया रोकेर वार्ताका लागि दिएका दुई दिनको अन्तिम दिन शनिवार वार्ताको वतावरण बनाउन नेताहरु दिनभरि दौडधुपमै बिताए । वार्ताको वतावरण बनाउनु पर्ने माग गरिरहेका मधेशी नेताहरु पनि हिजो राजधानीमा अनौपचारिक वार्तामा व्यस्त रहे ।
सरकारी दल र आन्दोलनकारी पक्षबीच कुनै प्रकारको औपचारिक वार्ता नभएपनि गोप्य ढंगबाट विभिन्न दलका नेताहरु बीच अनौपचारिक छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । फोन वार्तादेखि लिएर प्रत्यक्ष भेटघाट समेत भएको बताइन्त । हिजो वार्ता गर्नेमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमा गच्छदार रहेका छन् ।
कपिलवस्तु शनिवार नै आएका महन्थ ठाकुर र महेन्द्र यादवले नेपाली काँग्रेसका नेता एवं वन मन्त्री महेश आचार्यसँग अनौपचारिक वार्ता भएको छ । यद्यपी शुक्रवार नै काठमाडौ आएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव शनिवार पार्टीका विशेष कामले भोजपुर पुगेका थिए । वार्ताका लागि उनलाई पनि पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थिए तर दुईटै फोन अफ भएका कारण सम्पर्क हुन नसकेको डा.बाबुराम भट्टराईका स्वकीय सचिव विश्वदीपले बताए । उनले डा.बाबुराम भट्टराईले फोनमा अन्य नेताहरुसँग कुरा जस्तै उपेन्द्र यादवसँग वार्ता गर्ने भनि कुरा गर्न प्रयास गरेका थिए तर मोवाइल अफ भएका कारण सम्पर्क भएन यद्यपी फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र महन्थ ठाकुरसँग कुराकानी भएको बताए ।
तीन दलको तर्फबाट वार्ताका लागि भएको आह्वानपछि मधेशमा आन्दोलन गरिरहेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका घटक दलहरु संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव काठमाडौ आउनु भएको थियो ।
मन्त्री आचार्यले तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवसँग कुराकानी भएको बताए । उनले दुई नेतासँग कुनै औपचारिक वार्ता भएको होइन, वार्ताको वतावरण बनाउन के कस्तो गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा मात्र छलफल भएको र यसलाई वार्ता भन्न नमिल्ने पनि बताए ।
राससका अनुसार तमलोपाका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले कुनै दलसँग औपचारिक वार्ता नभएको बताए । उनले यही अवस्थामा वार्ता नहुने पनि बताए । वार्ताको वतावरण नबनेसम्म वार्ता नबस्ने बताउँदै विभिन्न दलका नेतासँग अनौपचारिक वार्ता भएको पनि बताए ।
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजया कुमार गच्छदार र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पनि भेटवार्ता भएको छ । भेटमा अध्यक्ष गच्छदारले वार्ताका लागि वतावरण बनाउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिएको छ । सविधान निर्माणको प्रकृया दुई दिन रोकेर मात्र वार्ताको वतावरण नबनेकाले समय थप गरेर अन्य शर्तहरु पूरा गरे मात्र वार्ताको वतावरण बन्ने विषयमा कुराकानी भएको छ ।